कसरी PowerPoint को लागी यूट्यूब भिडियो डाउनलोड गर्ने? ➡️ अनुयायी ▷
ती प्रयोगकर्ताहरु जो आफ्नो PowerPoint प्रस्तुतीकरण को लागी एक अधिक आकर्षक स्पर्श दिन चाहानुहुन्छ उनीहरु सीधै Youtube प्लेटफर्म बाट भिडियो सम्मिलित गर्न को लागी प्रयास गर्न सक्दछन्। त्यसोभए तपाइँको प्रस्तुतिहरु बोरिंग को रूप मा उनीहरु को लागी प्रयोग गरीने छैन। यदि तपाइँ यो कसरी गर्न को लागी जान्न चाहानुहुन्छ भने निम्न लेख पढ्न निश्चित हुनुहोस्।
PowerPoint सबैभन्दा लोकप्रिय उपकरणहरु जब प्रयोगकर्ताहरु द्वारा प्रयोग गरीन्छ प्रस्तुतीकरणहरु को एक हो। यो मञ्च मा हामी मल्टीमीडिया फाइल को कुनै पनि प्रकार सम्मिलित गर्न को लागी विकल्प छ, छविहरु, ध्वनि र यूट्यूब मा पोस्ट भिडियो बाट। आज हामी तपाइँलाई यो प्राप्त गर्न को लागी सबैभन्दा सजिलो तरीका देखाउँछौं।
तरिका PowerPoint मा एक यूट्यूब भिडियो सम्मिलित गर्न
सुसमाचार यो हो कि त्यहाँ एक PowerPoint प्रस्तुति मा एक YouTube भिडियो सम्मिलित गर्न को लागी धेरै तरिकाहरु छन्।। यो गर्न को लागी सबैभन्दा सजिलो तरीका "सम्मिलित गर्नुहोस्" बटन मा क्लिक गरेर र "अनलाइन भिडियो" विकल्प को उपयोग गरेर हो।
त्यहाँ बाट तपाइँ सक्नुहुन्छ Youtube प्लेटफर्म बाट सीधा भिडियो पत्ता लगाउनुहोस् र तपाइँको PowerPoint प्रस्तुति मा सम्मिलित गर्नुहोस्। तपाइँसँग Youtube बाट भिडियो लिंक को प्रतिलिपि गर्ने र PowerPoint टेम्प्लेट मा टाँस्ने विकल्प छ। यो कसरी तपाइँ यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ:
स्थानहरू भिडियो तपाइँ PowerPoint मा सम्मिलित गर्न र ठेगाना पट्टी बाट लि copy्क प्रतिलिपि गर्न चाहानुहुन्छ।
अप्रिल PowerPoint र छनौट गर्नुहोस् स्लाइड जहाँ तपाइँ Youtube भिडियो राख्न चाहानुहुन्छ।
विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस् "सम्मिलित गर्नुहोस्"र" भिडियो "मा क्लिक गर्नुहोस्
अब तपाइँ विकल्प छान्नु पर्छ "अनलाइन भिडियो"
एक अनलाइन भिडियो संवाद खुल्नेछ। त्यहाँ तपाइँ हुनेछ यूआरएल टाँस्नुहोस् कि तपाइँ Youtube बाट प्रतिलिपि गर्नुभयो।
थिच्नुस "सम्मिलित गर्नुहोस्"र तयार छ।
प्रयोगकर्ताहरु लाई यूट्यूब प्लेटफर्म बाट सीधा भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यसलाई कुनै PowerPoint स्लाइड सम्मिलित गर्नुहोस्। यसो गर्न को लागी, उनीहरु लाई मात्र यूट्यूब अनुप्रयोग को उपयोग गर्न को लागी, उनीहरु डाउनलोड गर्न चाहान्छन् भिडियो चयन गर्नुहोस्, लि copy्क को प्रतिलिपि बनाउनुहोस् र यी डाउनलोड पृष्ठहरु मध्ये एक मा टाँस्नुहोस्।
भिडियो डाउनलोड गर्दा तपाइँ ढाँचा को बारे मा धेरै सजग हुनु पर्छ। याद गर्नुहोस् यो एक हुनु पर्छ मिल्दो फाईल ढाँचा तपाइँको PowerPoint को लागी, AVI, MPG वा WMV को रूपमा।
डाउनलोड ढाँचा छनौट पछि, मात्र गर्न को लागी बाँकी छ बटन मा क्लिक गर्न को लागी छ "डाउनलोड गर्न"र फोल्डर चयन गर्नुहोस् जसमा हामी फाइल डाउनलोड गर्न चाहन्छौं।
डाउनलोड गरिएको भिडियो घुसाउनुहोस्
हामीले सफलतापूर्वक प्रक्रिया को पहिलो चरण पूरा गरेका छौं। युट्युब भिडियो हाम्रो कम्प्युटर मा डाउनलोड गरे पछि अर्को चरण PowerPoint स्लाइड मा सम्मिलित गर्न को लागी हुनेछ.
PowerPoint खोल्नुहोस् र स्लाइड चयन गर्नुहोस् जहाँ तपाइँ भिडियो सम्मिलित गर्न चाहानुहुन्छ। अब विकल्प मा क्लिक गर्नुहोस् "सम्मिलित गर्नुहोस्"र त्यसपछि" चलचित्र र ध्वनि "मा क्लिक गर्नुहोस्। एक नयाँ ड्रप-डाउन मेनु स्वतः देखा पर्नेछ।
थिच्नुस "फाइल बाट फिल्म"र फोल्डर पत्ता लगाउनुहोस् जहाँ तपाइँ YouTube भिडियो डाउनलोड गर्नुभयो। त्यसपछि तपाइँ स्लाइड मा भिडियो सम्मिलित गर्न "ठीक" मा क्लिक गर्नु पर्छ।
तपाईं पर्छ छनौट गर्नुहोस् यदि तपाइँ भिडियो स्वचालित रूपमा प्ले गर्न चाहानुहुन्छ वा यदि तपाइँ फाइल खेल्न चाहानुहुन्छ जब तपाइँ यसलाई थिच्नुहुन्छ। अन्तमा तपाइँको स्लाइड र भोइला मा फिल्म फाइल को आकार परिमार्जन गर्नुहोस्।
1 तरिका PowerPoint मा एक यूट्यूब भिडियो सम्मिलित गर्न
2 Youtube भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्
3 डाउनलोड गरिएको भिडियो घुसाउनुहोस्